Ukupheka nge Nkukhu
Into emnandi ke nge nkukhu kukuba phantse yonke iyaphekwa, ungatya inyama enezakha mzimba usebenzise amathambo ashiyekileyo ukwenza istokho. Inyama nayo ingasetyenziswa ngendlela ezahlukileyo, ingatshiswa emlilweni, yenziwe isityu, igrilwe okanye ikhari. iButcher SA inalamacebiso okupheka alandelayo:
Inkukhu epheleleyo ikhona ezivenkileni, enamagila nengenawo amagila.inyama yangaphakathi (Amagila, izintso, intliziyo, isibindi, nentamo) xa uthenga inkukhu epheleleyo enamagila, amagila aye afakwe eplastikini ngaphakathi kwe nkukhu. Kufuneka isuswe ke le plastiki phambi kokuba iphekwe inyama.
Inkukhu ingaphekwa iphelelwe okanye inqunyulwe phakathi emqolo. Inkukhu epheleleyo inga thanjiswa izinongo, ifakwe nantoni phambi koku bhakwa okanye yenziwe irosti. Le nkukhu inqunyulwe phakathi iyanongwa emveni koko igrilwe, nge oveni okanye emlilweni wembiza.
Amaphiko enza isidlo sokuqala okanye esokulibazisa esilungileyo. Ingakumbi ne ncindi emnandi okanye isinongo. Anga bekwa emlilweni okanye embizeni.
Isifuba Namahleza Enkukhu
Isifuba namahleza anenyama emhlophe enokutyeba kancinci. Amahleza athambile kunesifuba. Zombini ke zinga bhakwa, zi grilwe emlilweni, ziphekwe kwi oven, epanini, zizodwa okanye ne zityu, suphu kunye ne salad ngolwimi lwase mzini. Zingane sikhumba okanye necala lephiko elincamathele enyameni.
Imilenze, ine thanga lenkukhu, umlenze nethanga. Zibonwa nje ngezona ndawo zimnandi zinencasa enkukhwini. Zinga nongwa, zigrilwe, zi braywe, kwase zingasetyenziswa nakwi mbiza zenyama, ikhari nezityu.
Isibindi silunge kakhulu ukunikeza isakha mzimba i-iron ne protein, singaphekwa epanini nge garlic nezinye izinongo ukwenza incasa. Ikulungele nokuqhotshwa, iNose to Tail icebisa okokuba sibekwe Kumasi amuncuku aziwa ngokuba yi buttermilk okanye amanzi ane acid phambi kokuba iphekwe ukwandisa incasa.
Amanye amagila, intliziyo, nezintso, zingabiliswa ukwenza umhluzi okanye ziqhotswe. Ungafaki isibindi xa usenza istokho njengoko izakusenza sibe krakra.
Amagila aphezulu kwisakha mzimba i-iron, vitamin A no C, ne Calcium, sodium kunye ne potassium, loxa intliziyo ilungile kwizakha mzimba iprotein, iron, vitamin B12, folate, ne zinc. Izintso, ngokuka Nose and Tail, zikwanayo neyaziwa ngokuba yi Melatonin Receptor ngelasemzini edume ngoku lwa nokuguga kunye nomhlaza. Isetyenziswa kakhulu kwimbiza zama French nama China.
iCockscomb ifana ne jeli, inayo iprotein encinci kunye ne amino acids. zizinongo eziqhelekileyo kwisidlo sama China (Dim sum) nama Taliyane (Italian Cibreo). Amatanyula ane protein, sodium, potassium, iron, zinc, phosphorus kunye magnesium esetyenziswa ekuphekeni isuphu yenyama nemifuno kunye nezityu. Isacholo namatanyula kufanele zicocwe, zibiliswe ukuze kuvele inyama ethambileyo phambi kokuba ziphekwe.
Amanqina enkukhu agcwele iprotein, calcium, collagen, ne cartilage. Angaqhotswa okanye abiliswe ukwenza isuphu. Kufuneka kususwe amaxolo phambi kokupheka amanqina enkukhu.